ah, ဆွစ်ဇာလန်, အကြားအဆင်ပြေထိုင်သောလှပငြိမ်းချမ်းသောတိုင်းပြည် အီတလီ, ပြင်သစ်, နှင့် ဂျာမနီ. ဆွစ်ဇာလန်တသမတ်တည်းကမ္ဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးတိုင်းပြည်များထဲကတစ်ခု rated အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ဖို့တစ်ဦးအလည်အပတ်တန်ဖိုးရှိဒါဟာင်. သင်ထင်လာသောအခါဒါသငျသညျ '' အဘယ်သို့ထင်ကြဘူးဆွစ်ဇာလန် ''? ကျွန်မခန့်မှန်းနေပါတယ် ဆီးနှင်းဖုံးထိပ်, ဒိန်ခဲ, နဲ့ချောကလက်. ချောကလက်အဘို့အချိန်အများကြီးရှိလိမ့်မည်နှင့် ဖွန်ဒူး သင့်ရဲ့ဆွစ်ဇာလန်အပေါ် vacay, ဒါပေမယ့်ယဉ်ကျေးမှုအပေါငျးတို့သပါဝင်သည်ဖို့သေချာပါစေ, သဘာဝက, ဒီတိုင်းပြည်ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးသမိုင်းအပျေါလှငျ. မော်ကွန်းရထားစီးနှင့်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ခြေကျင်တောင်တက်ခရီးကြမ်းထဲကနေမေးရိုး-ကျဆင်းနေဗိသုကာရန်, ဆွစ်ဇာလန်တိုင်းရာသီအတွင်းခရီးသွားအမျိုးအစားတိုင်းပူဇော်ဖို့တစ်ခုခုရှိပါတယ်. သင့်ရဲ့များအတွက်မဖြစ်မနေ-dos အချို့ဖြိုဖျက်ကြပါစို့ ဆွစ်ဇာလန်မှခရီးစဉ်.
ဤသည်ကြီးမားသောလိုဏ်ဂူတစ်ခုရှိပါတယ် အင်းအိုင် နှင့် ပွဲခန်းမ ကြောင်းအတွင်း၌အမှန်တကယ်အကြောင်းကိုလိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ် 400 လူများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဘူဖေးညစာစားပွဲအဖြစ်ဖြစ်ရပ်များထွက်ငှားရမည်, ပါတီများက, နှင့်မင်္ဂလာဆောင်. အဲဒီမှာဖြစ်ရပ်များ DJs feature, သိပ်ပြီးမ, နှင့်ဂီတသမား. သငျသညျ Vitznau ကနေထူးခြားတဲ့ destination သို့သမိုင်းဝင်ရထားယူနိုင်ပါသည်. သူတို့ရဲ့ website သို့သာဂြာမနျတွင်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်သင်ပိုမိုခရီးသွားအင်ဖိုအတွက်မဆိုနိုင်ငံခြားဘာသာစကားဝက်ဘ်ဆိုက်များထွက်စစျဆေးဖို့ Google Chrome ကိုသုံးနိုငျ - သင်အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ချက်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်!
တိုင်းအဓိကမြို့တစ်ဦးရှိပါတယ် သမိုင်း သို့မဟုတ်ဘို့ကြောက်မက်ဘွယ်နေသောသိပ္ပံပြတိုက် မြို့ချိုး နှင့်မိုးရာသီ. သို့သျောလညျး, အချို့နေရာများအမှန်တကယ်ရှိ ထူးခြားတဲ့ပြတိုက် ကြောင်းရိုးရှင်းစွာလွဲချော်မဖြစ်သင့်. လူတွေက H.R သွားရောက်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလာ. Gruyere အတွက် Geiger ပြတိုက်.
ဖွန်ဒူးဖြစ်ပါသည် အကျော်ကြားဆုံးဟင်းလျာများ၏တဦးတည်း ဆွစ်ဇာလန်မှထွက်လာရန်, နှင့်ဤမျှမတော်တဆမှုဖြစ်ပါသည်. ပြည်သူ့ဆွစ်ဇာလန်၏အနောက်ဘက်ပြင်သစ်စကားပြောအစိတ်အပိုင်းအတွက်နှစ်ပေါင်းရာချီများအတွက်အများပိုင်အိုးထဲကနေအရည်ကျိုဒိန်ခဲစားသုံးခြင်းပြီ. သို့သျောလညျး, 1930 ခုနှစ် ဆွစ် ဒိန်ခဲပြည်ထောင်စုမှထုတ်ပြန်သောနှစ်ဦးစလုံးတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်နိုင်ငံတကာကဒီပန်းကန်စျေးကွက်, ထိုသို့တိုင်းပြည်၏ overabundance ရောင်းဖို့တစ်လမ်းအဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏အမျိုးသားရေးပန်းကန်ကြေညာ ဒိန်ခဲ. ငါတို့သည်သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ရွှင်လန်းကြ၏, အဘယ်သူသည်အရည်ကျိုဒိန်ခဲနှင့်ပေါင်မုန့်ကိုကြိုက်မထားဘူး? ခြောက်သွေ့နှင့်သင်၏ဖွန်ဒူးတွဲ ဝိုင်ဖြူ, နှင့်ကျဆင်းလာနှစ်ဆဖို့မသခြောပါစေ!
ကအချိန်ရဲ့ စစ်မှန်သော ခင်ဗျားဆွစ်ဇလန်ကိုသွားရတာပေါ့ – ချောကလက်! ဆွစ်ဇာလန်က၎င်း၏ချောကလက်အဘို့အတော်လေးကျော်ကြား, သငျတို့သနိုင်ငံအတွင်းနေရာတိုင်းမှာလမ်းထောင့်များတွင်အများအပြားဇိမ်ခံ chocolatiers ရှာတှေ့နိုငျ, သို့သော်, ဇူးရစ်က၎င်း၏အများအပြားချောကလက်ခရီးစဉ်များအတွက်ကျော်ကြား. မှချောကလက်ခရီးစဉ်တစ်ခုရှိသည် တိုင်းဘတ်ဂျက် fit! သငျသညျမြို့အတွက်အကောင်းဆုံးချောကလက်အချို့နှင့်အတူမြို့ပျေါလှငျပေါင်းစပ်သောစနေနေ့နံနက်လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်ယူနိုင်ပါသည်. သငျသညျသေးငယ်တဲ့ချောကလက်စက်ရုံတစ်လှည့်လည်တာကိုကြိုးစားကြလိမ့်မယ်, နှင့် အတှေ့အကွုံ သင့်ကိုယ်ပိုင်အောင် ချော့ကလက်ပြား. အမှန်တကယ်ဇိမ်ခံနွေရာသီလှုပ်ရှားမှုအတွက်, တစ်ချောကလက်ယူ လှေဖြင့်ခရီးစဉ် ယင်းမှ Lindt နှင့် Sprungli အလုပ်ရုံ.
ရလား, ယခုသင်ဖွင့်ပွညျ့စုံကွောငျးနဲ့ချောကလက်နဲ့ချိစ်, နောက်တဖန်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အချိန်က! ဆွစ်တောင်များဖွင့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနှင်းလျှောစီးအဘို့မဟုတ်! ရှိပါတယ် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာနွေရာသီဘာ့ဂ် သင်တို့ရှိသမျှသည်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းသွားနိုင်သည်ကို, ဒါပေမယ့် Jungfrau ဒေသသင့်ရဲ့ရေပုံးစာရင်းတွင်မြင့်သောတက်ဖြစ်သင့်. အဆိုပါ Jungfraujoch မှာဥရောပတိုက်တွင်အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုဖြစ်ပါတယ် 3,454 မီတာ (~ 11.330 ခွကေို) နှင့်အမြင်လွဲချော်မဖြစ်သင့်. သင်တစ်ဦးကြီးတွေခရီးသည်မဟုတ်လျှင်သင်အဲဒီမှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးယူပါလိမ့်မယ်တဲ့ရထားလမ်းရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်သင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွင်းမှာသွားရောက်ကြည့်ရှု. သင်တစ်ဦးစိန်ခေါ်မှုတက်သည်မှန်လျှင်, ဤလမ်းကြောင်းအချို့ကိုထုတ်စစ်ဆေး ဒေသတွင်း၌. လမ်းကြောင်းအတော်များများဟာလမ်းတစ်လျှောက်ဒဏ်ငွေအစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာထူထောင်မှုများ, ဒါကြောင့်စိတ်ပူစရာမလို, သငျသညျကြမ်းတမ်းကြောင့်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-experiences-switzerland-winter-summer/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)